Soosaarayaasha Soosaarayaasha - Warshadaha Wax Soo Saarka Shiinaha, Shirkadaha
Jaranjarada & Gacmaha
Jaranjarada fiberka dhalada ah iyo gacmo-gacmeedka waxaa inta badan lagu sameeyaa hannaanka kala-guurka, waxayna isugu yimaadaan qeybo badan oo isku xirnaansho ah. Waxay leeyihiin howlaha jaranjarooyinka caadiga ah iyo gacma-dhaqameedka. Intaa waxaa sii dheer, jaranjarada fiberlass-ka iyo gacma-galeenka ayaa iska caabin kara nabaad-guurka iyo miridhku, waa badeecado aad ugu habboon deegaannada waxyeellada leh.
Tallaabooyinka fiberka galaaska waa nooc ka mid ah shaambaynta fiberka, loo istcimaalo sida jaranjarooyinka lagu tuuro ama jaranjarooyinka. Guud ahaan ciidda ayey ku daboolan tahay si bilaash ah.
Qalabka firi-gooska ah ee fiberglass waxaa lagu muujiyaa iska caabbinta dillaaca, uma baahna rinji, uma baahna dayactir, cimri dheer adeeg, culeys fudud, rakibid fudud iyo uma baahna aalad wiish qaadis ah, iwm.
Fadhiyada & Daboolida
Kala-shaandhaynta fiber-ka ee loo yaqaan 'Jrain's Fibrelass Fiberlass' waa shaashad mesh xoog leh taas oo ah doorashada dabaqa kiimikada u adkaysata dalabyo badan oo warshadeed.
Nooca: guddi furan & gole daboolan
Jrain waxay soo saari kartaa alaabooyinka walxaha loo yaqaan 'fiberglass' sida sariir caafimaad, tuubbo / taageero, aruurinta qoyaanka, sanduuqa ciyaarta, dheriga ubaxa, alaabada macaanka, durbaanka iyo wixii la mid ah oo ku saleysan shuruudaha macaamiisha ee midabada, qaababka, cabirrada, shaqooyinka, cadaadiska iyo heerkulka.
Gawaarida iyo Doomaha
Jrain waxay soo saartaa gawaarida fiberlass-ka iyo maydadka kaladuwan. Waxaa lagu sameeyaa hannaanka kor u qaadista gacanta, laakiin cabbirrada waxaa lagu xakamayn karaa dulqaad yar. Muuqaalka quruxda badan, qaab dhismeedka adag iyo gawaarida fiberlass miisaanka fudud iyo doomaha ayaa si aad ah ugu caan baxay suuqyada Shiinaha iyo caalamka.
Daboollada fiberglass waxaa ka mid ah noocyo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidnayn daboolida haanta, daboollada musqusha, daboolka silooyinka, daboollada xijaabku (ilaalintiisa), guluubyada, daboollada bullaacadda bullaacadda, daboolka ka qaadista cilladaha cilmiga noolaha, iwm.
Cabbir: cabir kasta marka laga codsado macmiilka
Qaababka: qaab kasta oo ka yimaada codsashada macmiilka
Thecaddeynta hufan iyo nidaamka shaandheynta ayaa ah qeybaha lagama maarmaanka u ah dhirta daaweyn kasta. Qeexida fiberka galaasyada iyo deganayaashu waxaa loogu talagalay in si heer sare ah looga saaro xalka adag ee biyaha, biyaha wasakhda ah iyo codsiyada warshadaha.
Cabbirka: Lagu Sameeyay
Fiberglass tuubada waxaa loo isticmaali karaa in lagu gaarsiiyo gaaska hoostiisa gaaska deegaanka burburka. Tuubbooyinka noocan oo kale ah waxay noqon karaan kuwo wareegsan ama afar gees ah, waxayna iska caabin karaan gaaska gaaska, sida gaaska koloriinta, gaaska lagu buufiyo, iwm.
Moodellada: Wareega, afar geeska, qaab gaar ah, loo habeeyay, iwm.
Nidaamka tuubbooyinka firfircoon ee dib-u-xoojinta ee heer-kulka ka samaysan (ama FRP pipe) waa qalabka loo adeegsado nidaamyada biyo-mareenka iyo nidaamyada biyaha ee kala duwan.
Isku-darka xoogga FRP iyo isku-darka kiimikada ee balaastigga ah, tuubbooyinka fiberglass-ka waxay macaamiisha siisaa fursad ka sarreysa oo ka sameysan bir-bir qaali ah iyo bir-dahaarka ka sameysan.
Cabbirka: DN10mm - DN4000mm
Labada Alaab ee Laminate Products
Adoo isku daraya khadadka heerkulka heerkulka kala duwan sida PVC, CPVC, PP, PE, PVDF iyo HDPE oo ay ka kooban tahay balaastiig furuuruc lagu xoojiyay (FRP), Jrain waxay bixisaa xalal loogu talagalay jawiga aadka u kulul iyo jawiga.
Cabbirka: kuma eka xaddiga wasakhooyinka ama burooyinka la heli karo, cabbirrada waxaa loo go'aamin karaa inay ku habboon yihiin shuruudaha codsiga si sax ah.
Nadiifiyaasha fiberlass-ka ee Jrain waa taxane muraayadaha fiberglass sida maraakiibta habraaca, kiciyaareyaasha, munaaradayaasha, jiidayayaasha, qalabka wax kala baxa, Venturi, guluubyada duuban, guluubyaha daboolka iyo wixii la mid ah.
Dhoolatus gacmeed, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Caaryada, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Fiberlass-ka Farsamaysan, Mashiinka Dabaysha ee GRP,